Saturday 21st,Oct 2017 03:47 PM
म कर्कलाको पात टिपेर ल्याउँथे । पहिलेदेखि भाँचेर राखिएका सिन्काहरू प्ाातमा राख्थेँ र उनीतिर हेर्दै भन्थेँ, योचाहिँ, चुरोट ।
कालिमुन्टेका स-साना पातका पैसाले उनी सिन्काका चुरोट किन्न आउँथिन् । स-साना बाटुला परेका ढुंगालाई चकलेटको खोलभित्र राखेर बटारेपछि हामीले बेच्ने चक्लेट तयार हुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ वाइवाई र मामा चाउचाउको खोल पाइयो भने त त्यो खोलभित्र माटो टन्न राखेपछि हाम्रो त्यो सानो पसलमा बेच्ने सामान प्रशस्तै हुन्थ्यो ।
‘पसल थापी’ खेल खेल्दाखेल्दै अल्छी लाग्थ्यो उनलाई । धेरैचोटि म पसले बन्थे । उनलाई कहिलेकाहीँ मात्र पसले बन्न दिन्थेँ, सायद पुरुषप्रधान समाजको पुरुष हुँ भन्ने सोच बालसुलभ मष्तिस्कमा पनि थियो ।
दुई कक्षामा पढ्थ्यौं हामी । २ कक्षाको अन्तिम परीक्षाको रिजल्ट भयो । उनी प्रथम म द्वितीय । बुवाले मेरो पाइन्टबाट बाहिर निक्लिएको सर्टलाई पाइन्टभित्र च्याँपिदिँदै भन्नुभयो, ‘तलाईं जिती त इच्छाले ।’ यसो भनिरहँदा हार्नुको पीडा मेरो बालक आँखाले पनि ठम्याएकै थियो, तर मलाई लाग्यो बुवा निराश हुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन, इच्छाले जितेको त हो, आफ्नै इच्छाले । बेलुका फेरि पसल थापी खेल्दा भनिहाल्छु नि, ‘तिमीले मलाई नजित, म नै जित्छु तिमीलाई ।’ अनि उनले मानिहाल्छिन् नि । सँगैसँगै हुर्कियौँ हामी । उनी सुन्दर थिइन् । बुवाले पूजाकोठामा राधा कृष्णको तस्बिर झुन्ड्याउनुभएको थियो । मेरा लागि त्यो तस्बिरको राधा भन्दा सुन्दर थिइन् उनी । मैले पनि मेरो कोठाको भित्तामा फिल्मकी हिरोइन् काजोलको तस्बिर टाँसेको थिएँ । उनी त्यो काजोलजत्तिकै सुन्दर थिइन् । आँखा त ठ्याक्कै मिल्थे, ओठ पनि, दाँत पनि उस्तै, साह्रै राम्री ।
उमेर बढ्दै गयो । हाम्रो खेल खेल्ने साथीहरू फरक-फरक हुन थाले । म केटा साथीसँग चोर-पुलिस, पांग्रा गुडाई र गुच्चा खेल्न थालेँ । उनीहरू घोई सारी र गट्टा खेल्न थाले । हाम्रो बोलचाल कम हुन थाल्यो । उनको करेसाबारीमा साग र मुला प्रशस्त उब्जन्थे । उनी डोकोमा राखेर बजारसम्म बेच्न लैजान्थिन् । आमाभन्दा अगाडि नै आफ्नो डोकोको तरकारी बेचिसक्थिन् रे । मेरो दाइको व्रतबन्धमा पात गाँस्न भेला भएका बेला उनको आमाले सुनाएको । म त एक टकले सुनेको सुन्यै भएथेँ । जंगलमा दाउरा काट्न पनि जान्थिन् । वनपालेले भेटाइहाले उसलाई सम्हाल्ने र फुत्किन सहयोग गर्ने पनि इच्छा नै हुन्थिन् ।
असाध्यै मेहनती थिइन् इच्छा । हाम्रो घरको भन्दा उनको घरको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । ५ कक्षासम्म हामी सँगै प्राथमिक विद्यालयमा पढ्यौँ । ६ कक्षामा उनी सरकारी विद्यालयमा पढ्न जाने भइन्, म बोर्डिङमा । हाम्रो स्कुल फरक भयो । घर सँगै भए पनि हाम्रो भेटघाट पातलियो । घरसँगै सार्वजनिक धारा थियो, इच्छा पानी भर्न जान्थिन् । मेरो घरमा दाइ, दिदी र मबीच घर बाहिरको काम विभाजन हुन्थ्यो । पानी भर्ने काम मैले नै रोज्थेँ, कारण इच्छा पानी भर्न त्यही आउँथिन् । उनी कहिलेकाहीँ धारामा नुहाउँथिन् पनि । इच्छा पेटिकोटले आफ्नो छाती छोप्थिन् । अनि, आधा ढाड देखाएर धारामा थापिन्थिन् । पानीका थोपा उनको त्यो सुन्दर ढाडमा मोतीझैँ चम्कन्थे । पातलो पेटिकोट पानीले भिजेपछि उनका सुन्दर अंगका आकृति बाहिरबाट देखिन्थ्यो । तिनले काउकुती लगाउँथ्यो मलाई, म हेरिरहन्थे । मैले एकटकले हेरेको थाहा पाएपछि थोरै लजाएर पेटिकोट माथि रुमाल थपेर बेर्थिन् ।
बाल्यकालको राम्रो मित्रता, सँगै खेल्ने, सँगै पढ्ने हामी यौवनावस्थामा आउन्जेल मुखले बोल्ल छोडिसकेका थियौँ । आँखाहरू बोल्थे, सायद के बोल्थे, महसुस नै गर्न सकिएन । उनले गर्थिन् होला मैले उनको आँखा पढ्नै सकिनँ । इच्छाले द्वितीय श्रेणीमा एसएलसी पास गरिन्, मैले प्रथम श्रेणीमा । रिजल्टको दिन नरमाइलो लाग्यो, २ कक्षाको रिजल्ट सम्झिएँ । इच्छाले मलाई जितेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । हामी छुट्टाछट्टै कलेज पढ्ने भयौँ । मनभरि सँगै पढ्ने चाहना भएकै थियो । कलेज पढ्न थालेको केही दिनपछि नै इच्छाको विवाहको हल्ला गाउँभरि आयो । म विचलित भएँ । इच्छा त मेरो आफ्नो पो हो, कसरी उसको अरुसँग विवाह हुन सक्छ । घरमा गएर ममीसँग भनेँ, ‘ममी म विवाह गर्छु ।’
मभन्दा माथिका दाइ र दिदीको विवाह भएकै थिएन । त्यसमाथि पनि मेरो उमेर विवाह गर्ने नै थिएन । आफ्नो विवाहको कुरा आफैं ले गरेँ, त्यो पनि उमेरै नपुगी । त्यो सबै अनौठो लागिरहेको थियो सायद ममीलाई । मेरो प्रस्ताव ममीसँग पुग्यो र त्यहीँ रोकियो । तर, इच्छाको विवाहको कुरा भने रोकिएन ।
किन आकर्षित थिएँ म इच्छासँग, मैले कहिल्यै थाहा पाउन सकिनँ । उनीसँग आकर्षण शारीरिक थियो या आत्मिक, त्यो पनि थाहा पाउन सकेको थिइनँ ।
इच्छासँग बच्चामा दुलाहादुलही खेल्दा सधैँ उनको दुलाहा म नै बन्थेँ । कहिलेकाहीँ अरु दुलाहा बनिहाले भने म त्यो खेल नै भँाडिदिन्थेँ । अर्कै खेल खेल्ने भन्थेँ । बच्चामा खेल खेल्दा अरुलाई इच्छाको दुलाहा हुन कहिले नदिने म वास्तविकतामा इच्छाको दुलाहा अरु नै हुने कुराले विचलित भएको थिएँ । मेरो दाजुदिदीभन्दा म किन ठूलो भएनछु, किन जेठो छोरो भएर जन्मिनछु भन्ने प्रश्न मनभरि पालेर भौँतारिरहें ।
एकाएक इच्छाको विवाहको कार्ड मेरो घरमा आयो । दिन बित्दै गए कार्ड मात्र होइन, कार्डमा लेखिएको दिन पनि आयो ।
आमा विवाहमा जान तयार हुँदै हुनुहुन्थ्यो । मतिर हेेरेर भन्नुभयो, ‘तेरो बच्चादेखिकै साथी इच्छा, साह्रै सरल, राम्री थिई, जात पनि मिल्थ्यो । तेरो विवाह उससँगै गरौँला भनेको त कति चाँडै विवाह गर्दिए ।
आमाले यसो भनिरहँदा जिस्काएजस्तै लाग्यो, तर आमाको आँखामा मप्रति सहानुभूति पाएँ । मेरो परिवर्तित व्यवहारले शंका पो गर्नु भयो कि क्या हो ?
इच्छाको घर मेरोभन्दा थोरै तल थियो । बाजाको आवाज प्रस्ट सुनिन्थ्यो । बाजाको आवाजले पनि जिस्काइरहेको जस्तो लाग्यो । आमाले मलाई विवाहमा जान कर गर्न थाल्नुभयो । मैले झोँक्किएर जान्न भनेँ ।
आमा एक्लै जानुभयो, उहाँकै उमेरका संगीसँग । मेरो आँखाअगाडि अँध्यारो संसार मात्र थियो । इच्छा अब गाउँमा देखिन्नन् । धारामा नुहाउँदिनन् । इच्छा अब मेरो नजिक छैनन् । उनी त अरु कसैकी श्रीमती भइसकिन् । उनको त्यो सुन्दर मन र शरीरमाथि अरु कसैको राज चल्छ । यस्तै सोच्दै थिएँ, आमा आइपुग्नुभयो ।
भन्नुभयो, ‘बाबु इच्छाले तँलाई असाध्यै भेट्न खोजेकी छे । जसरी पनि एकपल्ट जा रे ।’ मलाई जान पटक्कै मन थिएन, इच्छासँग भेट्न हिम्मत पनि थिएन । इच्छालाई गुमाउनुको पीडा मनभरि थियो नै । त्यो पीडाबीच उनलाई भेट्नु झनै घाउमा नुन दल्नु बराबर हुन्थ्यो । हिम्मत निकालेर म इच्छालाई भेट्न विवाह घर गएँ । इच्छालाई यज्ञको सबै काम सकाएर भित्र कोठामा लगेको रहेछ । लगभग अन्माउने बेला भइसकेको रहेछ ।
मलाई देख्नेबित्तिकै इच्छा मुस्काइन् । तर, उनको मुस्कानमा पूर्ण खुसी थिएन । बसिरहेको कुर्सीबाट उठिन्, अनि मतिर आएर मेरो दुइवटा हात समाउँदै भनिन्, ‘सत्कार, तिम्रो बाल्यकालको साथीले तिमीसँग नभेटी विवाह सम्पन्न गर्न सक्छे त ? अनि, बच्चामा दुलाहादुलही खेल्दा सधैँ मलाई दुलही बनाउँथ्यौ । म अरुको दुलही भएँ भने त्यो खेल नै खेल्दैनथ्यौ । आजचाहिँ किन त्यसो नगर्ने ? मलाई सहजै अरुको हुन दिने ?’
इच्छाको आँखाबाट आँसु झरिरहेका थिए । ती आँसुको थोपा भित्र अव्यक्त प्रेमको पीडा प्रस्टै देखिन्थ्यो । मलाई समाएका उनका हात छुटाएर म त्यहाँबाट भागेँ । दौडिँदै गर्दा मनमनै अठोट गरेँ, ‘इच्छा, म तिम्रो यादमा जीवनभर एक्लै बस्नेछु । म तिमीबाहेक अरुसँग जीवन काट्न सक्दिनँ ।’
आज फागुन १५ गते, इच्छाको विवाह भएको पनि पाँच वर्ष भयो ।
खै थाहा छैन, त्यो मेरो प्रतिज्ञा क्षणभरको संवेग वा जीवनभरका लागि भीष्मप्रतिज्ञा के हुने हो । तर, आजसम्म इच्छाको यादमा एक्लै भाग्दै छु, भौँतारिँदै छु, नितान्त एक्लै ।